तत्काल रोजगार सिर्जना गर्ने खालका योजना प्राथमिकतामा « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७७, आईतवार १६:३२
उपाध्यक्ष, नीति तथा योजना आयोग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पछि गत सोमबार प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर अछामका केशरबहादुर साउँदलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । संघीय अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा उपसचिव रहीसक्नु भएका उपाध्यक्ष साउँदले अर्थशास्त्रमा स्नातक तथा अर्थ तथा योजनामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । २०१७ सालमा अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर ५, नेटाकोटमा जन्मिनुभएका उपाध्यक्ष साउँदले ३० वर्ष नेपाल सरकारको कर्मचारी रहेर २०७३ सालमा अवकाश लिनु भएको थियो ।
प्रस्तुत छ, उपाध्यक्ष साउँदसंग अनुमोदन दैनिकका लागि प्रधान सम्पादक मनमोहन स्वारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
प्रदेश सरकारले तीन वर्षपछि प्रदेश योजना आयोग बनाएको छ । तपाईं उपाध्यक्षमा नियुक्त भइसकेपछि यो प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको कस्तो सपना देख्नु भएको छ ?
हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पर्यटन विकासको सम्भावना छ । हामीसंग रामारोशन, खप्तड, घोडाघोडी, शुक्लाफाँटा लगायतका निकै सम्भावना रहेका पर्यटकीय स्थल छन् । त्यस्तै, हामीसंग हिमाल आरोहणको ठूलो सम्भावना छ । यी पर्यटकीय स्थल, हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटक भित्राउन सकियो भने यो प्रदेशको आर्थिक उन्नतीमा ठूलो फड्को लिने छ । अछामको रामारोशन, खप्तडकै कुरा गरौं । कोही पनि पर्यटकका लागि ती क्षेत्रमा लोकसंस्कृति, रहनसहनदेखि प्राकृतिक सौन्दर्य तथा साहसी पर्यटनको आनन्द लिने अवसर हुन्छ ।
हाँको मौलिक तथा आकर्षक लोकसंस्कृतिको आनन्द लिएपछि उसले नेपालमा अन्यत्र नभेटिने निकै सुन्दर बाह्र बण्ड (ताल), अठार खण्डसहितको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गर्छ । अनि त्यहाँबाट माथि चिकट्टे भन्ने स्थानसम्म ट्रेकिङ गर्ने र त्यो चुचुरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नौ जिल्लाको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछ । हामीले त्यहाँ राम्रो दूरवीनको मात्रै व्यवस्था गर्‍यौ भने पनि दृश्यावलोकनकै लागि मात्रै हजारौं पर्यटक त्यहाँ जाने सम्भावना रहन्छ । त्यहाँबाट हिमाल आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैले कोही पनि पर्यटकलाई एउटै प्याकेजमा पर्यटनको सबै स्वाद लिन पाउने छन् । त्यस्तै, त्यहाँ बहुमुल्य जडिबुटी प्रशस्त पाइन्छन् । रक क्ल्याइम्बिङको राम्रो सम्भावना छ । स्केटिङ तथा केबुलकारको सम्भावना छ । त्यसैले यो प्रदेशको विकासका लागि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ ।
अर्को कुरा कोभिड–१९ महामारीका कारण बाहिरबाट फर्केका नेपालीहरुका लागि तत्काल रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न अल्पकालीन उद्योगहरुको स्थापनामा जोड दिनु पर्दछ । बाँस, टिमुर, निगालो, बडु जस्ता पैदावारमा आधारित उद्योगहरु खोल्नु पर्दछ । त्यस्तै, व्यवसायिक पशुपालनमा ध्यान दिनु प¥यो । त्यस्तै, तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने डकर्मी, प्लम्बिङ, सिकर्मी, विद्युत वाइरिङ, सैलुन जस्ता सीपमुलक तालिम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सरकारले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्‍यो । हामीले अहिले नै धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होइन, तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने अल्पकालीन योजनाहरु अघि बढाउनु पर्दछ ।
त्यस्तै, हामीले आधुनिक कृषि प्रणाली अघि बढाउनै पर्दछ । टुक्राटुक्रामा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा सामुहिक फार्मिङमा लैजानु पर्दछ ।
उपाध्यक्ष ज्यू, तपाईंले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका सानासाना उद्योग खोल्ने कुरा गर्नु भयो ? यो कसले गर्ने ? सरकारले अथवा निजी क्षेत्र वा सरकार र निजी क्षेत्रको साझोदारीमा ?
यसको मोडेल भनेको सरकारले अनुदान दिने, निजी क्षेत्रले खोल्ने भन्ने हो । कम्तिमा सरकार र निजी क्षेत्रको आधाआधा लगानीको नीति अंगाल्नु पर्दछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका प्रमुख चुनौतिहरु के के हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा बजेटको अभाव नै हो । अर्को कमजोरी हाम्रो विद्यमान आर्थिक प्रणाली वा बजेट निकासा प्रक्रिया पनि हो । जस्तो, समयमा कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट निकासा हुँदैन । त्यस्तै, कुनै पनि योजना टेण्डर आदिको प्रक्रिया निकै लेन्दी हुने गर्दछ । अर्को कुरा योजनाका लागि निर्माण कम्पनीले पेश्की लिने र अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले हामीले आर्थिक ऐनमा नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षणको पक्ष कमजोर छ । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यसैले योजना आयोगबाट तर्जुमा भएका योजना मात्रै अघि बढाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजनाहरुको कडाईका साथ निरीक्षण, अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । योजनामा कमिशनको खेल, आर्थिक भ्रष्टाचार हाम्रा अघि चुनौति छन् ।
उपाध्यक्ष ज्यू, तपाईंले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई दृष्टिगत गरेर रोजगारीमुलक योजना अघि बढाउनु पर्छ भन्नुभयो । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो पहिलो भाषण मै “तीन वर्षभित्रै भारतमा रोजगारी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु” भन्नुभएको थियो । तर, कोरोना फैलिएपछि भारतबाट फर्किनेको भीड लाग्यो । फेरि तीनचार महिनापछि पुनः भारततर्फ जानेको लर्को लाग्यो ।
काम गर्ने जनशक्ति सबै भारत र विदेशमा, अनि यहाँ जस्तासुकै योजना बनाए पनि के अर्थ हुन्छ त ?
यो निकै महत्वपूर्ण सवाल हो । यसमा हाम्रो केही चुक भएको छ । भारत वा अन्य मुलुकबाट फर्केकाहरुलाई गाउँमा रोजगारी दिने, सीप, तालिम दिएर तथा सरकारले अनुदान दिएर उनीहरुलाई रोक्ने वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो भएन । कोरोना महामारी फैलिएपछि भारतबाट लाखौं नेपाली फर्किए । स्वदेशमै बस्ने भनेर आएका थिए । तीनचार महिनासम्म कुरे पनि । तर, सरकारले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनेतर्फ ठोस पहल गरे । अनि भोक सहन नसकेर उनीहरु उतै फर्किए ।
यो कोरोना कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? थाहा छैन । नयाँ खालको कोरोना देखापरिसक्यो । त्यसैले अब सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर उनीहरुका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय योजनाबारे स्थानीय तह, वडालाई नै थाह नहुने, कतिपय योजना पुरा भएको स्थानीय तहको सिफारिस नभए पनि भुक्तानी भएको, जनताको आवश्यकता र माग नभएका योजना पनि पठाइएको जस्ता थुपैं उदाहरण छन् । यसमा प्रदेश योजना आयोगले अगाडीका दिनमा कस्तो सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
हो, यो कुरा मैले अरुबाट पनि सुनेको छु । मुख्य कुरा स्थानीय जनताको आवश्यकता, लाभ र माग नै हो । मानौ कुनै गाउँमा सिंचाईंको आवश्यकता छ भने स्थानीयको सहभागितामा नै त्यसको सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस सहितको योजनाको माग गर्नु पर्दछ र सबै मन्त्रालयहरुले जनताबाट माग भइआएका योजनाहरु योजना आयोगमा पठाउने र आयोगले निर्धारित मापदण्ड अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, योजनाअनुसारको बजेट छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल गर्ने र सम्वद्ध मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने प्रक्रिया हो । विगतमा यसमा केही कमजोरी भएका छन् । हचुवाका भरमा योजना बनाइएका छन् । मन्त्रालयहरुले एकमुष्ट रकम राख्ने र पछि आफ्नै मनले बाँडफाँट गर्ने अभ्यास पनि देखिन्थ्यो । अब हामी निर्धारित मापदण्डका आधारमा योजना बनाउने र कोहीकसैको इच्छाका आधारमा योजना राख्ने काम रोक्ने छौं ।
त्यसो हो भने अबदेखि खल्तीबाट योजना हाल्ने, कम्प्युटर प्राविधिकले आफ्नै मनले योजना राख्ने, पहुँच तथा प्रभावका आधारमा मन्त्री र सांसदले योजना दिने, कसैको चित्त बुझाउन भागबण्डा गर्ने जस्ता अभ्यास पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछन् ?
निश्चित रुपमा अबदेखि यस्तो हुनेछैन । म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
अर्कोकुरा तपाईंले शुरुमै चुनौतिको प्रसंग उठाउनु भएको थियो । तीन वर्षपछि बल्ल प्रदेश योजना आयोग बनेको छ । हामीसंग कार्यालय राख्ने भवन छैन । बजेटको व्यवस्था भएको छैन । कर्मचारीको दरबन्दी नै निर्धारण भएको छैन । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मै दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था हुनसकेको छैन । भनेपछि यो आयोगका लागि कहाँबाट कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने ? यी सबै चुनौति छन् । यी सबैको प्रबन्ध गर्दागर्दै तीनचार महिना लाग्छ । हामीले फागुनदेखि प्रदेशको बजेट तथा योजना तर्जुमाको काम अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसो भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगले धेरै काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
अर्कोतिर अहिले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढेको छ । मेरो कार्यकाल चार वर्षको भए पनि मैले दुई वर्षको मात्रै कुरा गर्दछु । त्यसैले हाम्रा लागि निकै चुनौति छ । सहज ढंगले काम गर्न पाइयो भने कम्तिमा अर्को बजेट र कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगले जनताको मनछुने ढंगले काम गरेर देखाउने छ ।
सरकार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग काम गर्न कत्तिको सहज होला भन्ने सोच्नु भएको छ ?
सहज छैन । अहिले राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । म नै कुनै पनि वेला हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । ढुक्क भएर काम गर्न पाइयो भने मात्रै न आफ्नो क्षमताअनुसार परिणाम देखाउन सकिन्छ । तर, पनि जति हुन्छ काम गर्न दृढ छु ।
तपाईं प्रदेश योजना आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष बन्नु भएको छ । तपाईंले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्दैगर्दा कस्तो योजना आयोग (संस्था) बनाएर विदा लिने सोच बनाउनु भएको छ ?
कुनै पनि योजना हचुवाका भरमा, पहुँच र प्रभावका आधारमा छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा आवश्यकता अनुसार र लाभ लिनसक्ने ढंगले रोजगारमुलक तथा आयआर्जन बृद्धि गर्ने खालका योजना बनाउने संस्थाका रुपमा यसलाई स्थापित गर्छौ । हामीपछि आउने आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोगको व्यवस्थित कार्यालय, र राम्रो प्रणाली विकास भएको महसुस गर्न पाउनेछन् ।
फेरि एउटा सवाल दोहोराउँछु । अबदेखि पहुँच र प्रभावका आधारमा योजना हाल्ने, खल्तीबाट योजना पठाउने, भागबण्डा गर्ने जस्ता अभ्यासको साच्चै अन्त्य हुन्छ ?
हेर्नोस्, योजना आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुन्छन् । हामीले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा समन्वयमै काम गर्ने हो । निश्चित रुपमा योजना आयोगमा उपाध्यक्षको बढी भूमिका हुन्छ । मेरो बुझाईमा हाम्रो मुख्यमन्त्री निकै सरल, लोभलालच र प्रभावमा नफस्ने चरित्रको हुनुहुन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, उहाँको निर्देशन र समन्वयमा हामीले राम्रो काम गर्नेछौं ।
म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै दिदीबहिनी, दाजुभाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि “योजना आयोगले नै सबै योजना दिन्छ, बजेट दिन्छ” भन्ने खालको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो होइन भन्ने बुझिदिनुहोस् । योजनाहरु त मन्त्रालयहरुले नै दिने हो । हामीले कुन योजना उपयुक्त छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्ने हो ।
अहिलेसम्म योजना आयोग नहुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैले योजना बनाउने र आफै बजेट दिने गर्दथ्यो । जनताले अब मन्त्रालयको यो भूमिका आयोगले निर्वाह गर्छ भन्ने बुझ्नु भएको हुनसक्छ । त्यस्तो होइन भन्ने म जनतासंग अनुरोध गर्दछु ।